Ngokweengcali, akukho nto emangalisayo okanye engavumelekanga ukuba sinenkxalabo ekuhambeni kokusondelana noqabane olutsha. Emva koko, isondo ngokokuqala ngqa kwabasetyhini, kunye namadoda-isiganeko esibaluleke kakhulu. Imeko efanayo, okanye kunoko-ukulindela kwayo, kunokubangela umphefumlo kwanoma yimuphi umntu kunye nokuxhalaba, kunye novuyo, i-jaundice kunye nokuhlaziywa kokomoya okumangalisayo. Ngoko, isondo sokuqala, iingxaki ezinokuthi zidibaniswe nale nto kunye nendlela yokuziphepha ezi ngxaki ziyintloko yentetho yanamhlanje.
Uloyiko lokuqala "
Ukwesaba isondo sokuqala kuyinto engokwemvelo, kodwa ingaba yingxaki enkulu. Ngokomzekelo, amadoda ayesaba ukuba akuyi kubakho ukulungiswa, abesetyhini banesaba ukuba abayi kuba ne-orgasm. Nangona kunjalo, njengokuba kukho ukubonisa, ukwesaba "kokuqala" kunamandla onke, amaqabane ambalwa ababazana ngawo. Ngako oko, ukuba ukwesaba kakhulu imbono yokuthandana nomhlobo wakho, musa ukukhawuleza izinto. Yazi kakuhle.
I-sexologists icebisa abesetyhini ngaphambi kokulala ngesondo ngokukhawuleza baphosa ngaphandle kweentloko zabo iingcamango malunga neendlela ezinokubethwa kuzo. Kanye nje ngesigqibo esinqwenela ngamandla, vimbela ukucinga ngako - yikho konke. Ukuba ulwalamano lwakho nomntu onomthandayo lunokuthi uxoxe ngokukwesaba kwakho ngendlela enokuxinezeleka, kuya kuba ngcono. Oko kukuthi, nakunoma ikuphi, ulahlekise - okanye ngokwakho okanye ngoncedo lomlingane-ukusuka kwiingcamango ezilukhuni. Musa ukulala nale mthwalo enzima. Kwaye isisombululo esihle kunoma iyiphi ingxaki, kubandakanywa nale, kukuhlala uhlala. Musa ukuzenza njengomnye umntu, kodwa qiniseka kwaye uvule kunye nomlingane.
Kodwa nangona ungenalo ukwesaba kwakho kwezesondo zokuqala, akufanele ulibale ngeengxaki zomntu oyintanda. Ngenxa yokuba wena kuphela unokumnceda ukuba anqobe ngokukhuselekileyo. Kwaye ke, uzonqabisa, uvakalise ngokukhawuleza umbono wakhe wentando yeninzi ngobukhulu besithunzi sabantu. Ukongezelela, ngokubhekiselele kubameli bezesondo eziqinileyo, ibhinqa linceda babhekane neengxaki zokuxhalabisa, ngokunyamekela ukunyamekela ukutshatyalaliswa komlingane oqwengayo.
Indawo ebonakalayo yendawo yokulala
Unako ukuphucula ukuvakalelwa kunye nokunciphisa uxinzelelo obabili ulindele kulo mzobo, ukuba ujikeleze umda wexesha elixhamlayo kunye ne-entourage efanelekileyo. Okokuqala, qiniseka ukuba imozulu ikhululekile kangangoko kuwe - abafazi. Emva koko, kuphela kule meko nina nonke nandise ukwanda kwithuba lokufumana uxhamla kwi-intanethi, eya kuphelisa iingxaki kwilamano. Kwaye ke uqaphele ukudala ukulungelelwa kwamadoda.
Ngamanye amaxesha kuyiluncedo ngaphambi kocansi ukuze uphumelele ekukhanyeni okuphezulu. Kungcono, kodwa ukhanyisa ikhandlela. Le ndlela endalungileyo yokuvelisa i-atmosphere emoyeni izokunciphisa kakhulu i-jitters ebangelwa ukungabonakali kwimeko. Uze ushiye "kwixesha lokuqala" ukubonakala okungabonakaliyo kwiminyaka emininzi. Ngaphambi kokulala, qiniseka ukuba ubuza ukuba umntu akaphazamisi iTV okanye yimuphi umculo angathanda ukuwuphulaphula kule mzuzwana onomdla. Kwaye akunandaba nawuphi na o tyelelayo. Nangona uhlala kwintsimi yayo, ukulungelelanisa indawo efanayo yokhuseleko lomsebenzi ngumfazi.
Njengekhetho, cela iqabane lakho ukuba liqalise umdlalo wothando kunye neenkqubo zamanzi ezihlangeneyo - phantsi kwesitya okanye kwindawo yokuhlamba. Kakade, ukuba wena ngokwakho unanto nxamnye nayo. Kwakulungile ukuba uqale iseshoni yokudibanisa ngaphambi kokuba ityala lingasifiki embhedeni. Ngokuqhelekileyo iglasi ye-champagne inceda ukunqumla imeko. Kodwa oku kuchaswa kwabantwana!
Ungalibali umgaqo-siseko olwalamano lothando: ziphatha ngokwemvelo. Kuthekani ukuba uthe walala ngesibini kwaye ungazi ukuba ulala njani embhedeni? Yithemba uhlobo lwakho kunye nomthandayo. Yenza njengoko uhlobo lwakho ludinga, kwaye akunjalo, ekungcoleni kwakho, nayiphi na intombazana eyazihlonelayo kufuneka iphathe ngayo imeko. Ngaphezu koko, ngokwemadoda emininzi, akukho nto eyenziwa kubo njengento enokukhathazeka njengobani abachaphazelekayo nabanobubele abajongene naloo meko evelele.
Amadoda namabhinqa amaninzi avuma ukuba abayi kuze bafikelele ekuthandaneni nabo beselula baze bafumane iimpawu ezivela kumlingani wabo. Kwaye nesizathu salokhu - ukwesaba ukutshatyalaliswa, okubandakanya nezinye iimvakalelo ezingekho phantsi. Ukuba uvakalelwa kukuba ulwabelana ngesondo nantoni na ongenawo ulwalamano, ungafihli iminqweno yakho. Yiba nomnene kwaye uthandane nomlingane wakho. Ungakulibali ukuhlala uqhagamshelana naye kunye ne-eye contact - emva kwayo yonke into, ukubukeka okunomdla kunokuthetha okuninzi malunga neemvakalelo zakho. Ukuba wena okanye indoda ethandekayo ayikulungele ukulala ngesondo lokuqala, akufanele ugijime esi siganeko esibalulekileyo. Kwanele ukumbamba umthandi wakho kunye nokumanga.
Ukuba ulungele ulwabelana ngesondo lokuqala, kunye neqabane lakho lingalindeli, thatha inyathelo, kodwa ungabi ngonya. Akuyi kuba nephutha elikhulu xa uthatha isandla sakhe kwaye uyibambelele nayiphi na inxalenye yomzimba wakho, okanye unqamle ihembe lakhe. Ekugqibeleni, unokuthi ngomnqweno wakho kunye nombhalo ovulekileyo - amadoda amaninzi afana nalo. Kodwa khumbula: kuyimfuneko yokwenza oku kuphela xa uqiniseke ngokuqinisekileyo ukuba umthandayo unqotshwa yiminqweno efanayo.
Ukuhamba okanye ukuhlala?
Imeko eyenzeka ngokukhawuleza emva kokusondelana kokuqala, ayinakuxinezeleka ngakumbi kunokuba isingaphambili sayo. Umzekelo, wonk 'ubani uyazi ukuba abaninzi abafazi bayazibona ukurhoxiswa ngokukhawuleza kweqabane njengobungqina obucacileyo bokupholisa iimvakalelo zakhe. Thatha lula kumnqweno wakhe wokushiya emva kokulala ngesondo. Ewe, yenza umgudu uze ucinge ukuba unokufumana ezinye izinto zokwenza! Ukuba ugxininisa ukuba ahlale, khumbula engqondweni: amadoda ayithandi kakhulu oku. Akunakukuthandana nayo nayiphi na inxungulo inkululeko yabo eyigugu. Musa ukucinga ukuba emva kwesondo lokuqala, lo mntu unyanzelekile ukuba atshade nawe. Nguye lo wesaba kakhulu! Ukuba uvakalelwa kukuba le nto ucinga ngayo, uya kubaleka kude nawe. Ewe, unako ukuthobela iimfuno zakho eziqhubekayo kwaye uhlale emva kokuhlangana okuqala. Kodwa esi siqinisekiso sokuthi okwesibini, mhlawumbi, awuyi kubakho. Ngoko ukukhulula kuwo onke macala amane ngenhliziyo elula. Emva koko, ukuba wayenempilo nawe, uya kubuya ebuyela. Ewe, akayisisilumko sokuzikhethela ukuzinyamekela ngokwakhe!
Ungathuli ngeengxaki ebhedini
Ngokwezentlupheko, inkohlakalo eqhelekileyo yoqhagamshelwano lokuqala loxhatshazo lulolwano lwamaqabane, ukuba ayithandi into ethile. Oku kuyinyani ngokukhethekileyo kwisini sokuqala-iingxaki ezikhoyo apha zichazwe ukungabi namava. Abasetyhini badla ngokuhlazeka ukuba bavume ukuba iziganeko ezithile zesini zibenza bahlaziye. Bacinga ukuba benza into engalunganga. Indima yenxaxheba ekuphenyweni, ephethe umlomo wakhe kwitshixo, gcina elinye ibali.
Ukuba iqabane lakho lenza into engalunganga okanye ayikwazi ukuqaphela ngeminqweno yakho - ungathuli! Qonda: unqwenela kakuhle kwaye ufuna ukuvuyisa. Kodwa unokwenza ntoni ukuba abantu bebunzima bengaboni kakuhle. Mxelele ukuba yintoni na oyenzayo ukuba enze. Uza kubona - uya kukufumana ngokuzithandela. Kodwa nangona xa yonke into ihamba kakuhle, akukho nakubungozi ukuxelela iqabane malunga nalo. Ngenxa yokuba akukho nto iguqula abantu njengamazwi omfazi othandekayo ukuba amakhwenkwe akhe amnika inkululeko.
Zive ukhululekile kumzimba wakho
Isizathu esivamekileyo sokukhathazeka kwabasetyhini kukuba ukwesaba ukungafezeki komzimba wabo, owokuqala wabonakala ngobunqunu phambi komntu othandekayo. Nangona kungacacile ukuba kutheni abafazi bethatha, ukuba amadoda adinga kuphela i-supermodels? Emva koko, ukuba bekunjalo, bonke babeya kulala neepopi ze-Barbie ezingathandabuzekiyo. Kwaye ekubeni ekhetha wena, kuthetha ukuba wena, ngaphandle kokungathandabuzeki, ukhangela emehlweni akhe obhenkco kunye nokukhangayo. Kodwa nangona ukholelwa ngokuqinisekileyo kule nto, ukugxininisa ekuqaleni kwemidlalo yothando ngumzuzu ophawulekayo, ukubaluleka kokungenakucingwa. Kungenxa yoko ukuthobela imithetho ethile kunokukunceda kakhulu ekufezeni ukuvumelana phakathi kombhede omnye.
Ngokubhekiselele kumagumbi angaphantsi, ngoko, ngokobulili, ngokokuqala ngqa kufuneka kube yimpumelelo, kodwa kungabi yidlala kakhulu. Okugqithiseleyo "imfesane" engcono kakhulu kulondoloze ixesha elizayo, ngenxa yenkxalabo eqhutywe ngayo, ngokuqinisekileyo uya kuyifumana, ukuba imicimbi yakho yothando iya kuhamba kakuhle. Ngokutsho kobungqina besondoologists, amadoda amaninzi amkela iisitokisti kumaqela e-ecy elastic, kunye nama-lace thongs. Kodwa i-bras kwi-rabra ye-foam kwi-sex strong isingenakuhlonipha. Bathukuthele kakhulu ngenxa yemeko eyahlukileyo ngobukhulu bomqhubi weqabane ngaphambi nangemva kokususa le nxalenye yangasese. Kodwa abo basetyhini abajwayele ukwenza ngaphandle kweengubo ngaphantsi kweebhulukhwe kunye ne-pantyhose, ngenxa yokuqokwa kwamadoda okuqala kodwa kuyacetyiswa ukuba sinxibe. Emva koko, xa iqabane lakho lihlala ligxininise, lo ngumkhwa wakho omhle uya kumvusa kakhulu. Kodwa, xa ufumene okokuqala ngqa, indoda ingatshwenyeka. Akunakunyulwa ukuba kule meko ibhinqa liya kubonakala lifikeleleke kwabanye.
I-prelude enhle kwisini sokuqala ingaba ukutshatyalaliswa okufanayo, kwenziwa ngokuthe ngcembe, xa amaqabane athatha ngokuthe ngcembe into into. Ukunciphisa okunjalo kwenkqubo kunceda kuphela ukukhuthaza ukuthanda. Ewe, malunga nokususwa ngokufanayo kweengubo ezivela omnye komnye kwaye ungatsho nto - kwiincwadi zokubhala izithandwa zabasebenzi, le nkqubo iqwalaselwa nje kuphela. Enyanisweni, isantya senkqubo ayichazwanga apha, kuba yonke into ilawulwa ngumoya wamacala. Kodwa ukuba zombini abalingani banentloni, kungekudala oku kwenzekayo, bhetele.
Izabelo zokuqala ziquka iingxaki ezinokuthi zidibene nokukhulelwa okungafunekiyo. Ukuba unomdla malunga nokukhuselwa kokukhulelwa okanye ukusuleleka kwiintsholongwane, ngoko uya kuba nombuzo wokusebenzisa umlingani wekhondom. Qala ukuxoxa ngalesi sihloko ngokukhawuleza ukuba uqaphela ukuba yinto ebusondeleyo. Musa ukuyibeka kude kube yimva kamva, xa ukukhwabanisa kugcwele. Ndiyavuma, kunengcikivo ukuphazamiseka ngengxoxo yeshishini ecaleni kwesigxina. Kwaye ngokubanzi, yinto efanelekileyo ukuqala ukuqinisekisa isimo sengqondo somlingane wakho kule ndlela yokukhusela. Emva koko, ukuba uyayenqaba ngokucacileyo kuye, uya kuba neyodwa indlela yokuphuma kwimeko - ukuhamba ngendlela engokoqobo. Kodwa nangona isisombululo esifanelekileyo kwimiba, musa ukulibala oku kulandelayo. Nangona abazalwana abanamhlanje behlala benamakhondom kunye nabo, kuya kuba ngcono ukuba ubagcinele ngaphambili, xa kunjalo. Ngokubhekiselele ekusebenziseni ngokuthe ngqo le ngongoma, ngoko, ngokumalunga namadoda, bathanda kakhulu xa ibhinqa libanceda ukuba banamathele. Ngoko ke, sebenzisa kwangaphambili, umzekelo, kwiibhanana.
Ukwabelana ngesondo ngokokuqala ngqa ibhinqa inemibandela emihle, musa ukuvumela le mcimbi yodwa. Lungiselela kusengaphambili uze wenze okhethekileyo ngokuhlwa!
Iimpawu zobuntu besini
Iintlobo zezilwanyana zesini
Izinzuzo zobusi ngenxa yomzimba
I-Pearl ibhasi ye-barley kunye nenyama
Ukutya kwabantwana abangaphantsi kweminyaka emithathu ubudala
Indlela yokudweba ihashe kwisinyathelo sepensile ngesinyathelo
I-kitsch yangaphakathi: indlela yokudala imimandla ephathekayo kwindlu
Indlela yokuhlala ngokukhawuleza kwintsapho enkulu